Ninkii la filayey inuu noqdo ra'isal wasaaraha Talyaaniga oo tanaasulay - BBC News Somali
Ninkii la filayey inuu noqdo ra'isal wasaaraha Talyaaniga oo tanaasulay
Ninkii la filayey in uu noqdo ra'isal wasaaraha Talyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa ka tanaasulay xilkaas ka dib markii madaxweynaha dalkaasi diidmada qayaxan ku hor joogsaday ninkii uu doonayey in uu ka dhigo wasiirka dhaqaalaha.
Madaxweyne Sergio Matarella ayaa sheegay in uu aqbalay dhamaan soo jeedintiisa laakiin aanu ogolayn in uu aqbalo Paolo Savona oo ah nin midnimada Yurub aad uga webiya.
Tallaabadan Matarella waxay ka cadhaysiisay xisbiyada doorashadii ku guulaystay ee doonayey in ay dawlad wadaaga soo dhisaan. Luigi Di Maio, oo ah hogaamiyaha xisbiga Five Star ayaa ku baaqay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Dhacdadan waxa ka sii horraysay arrin kale oo muran dhalisay, taas oo ahayd in Giuseppe Conte oo ah 54 jir oo takhasusay qaanuunka, shaki la geliyey aqoontiisa jaamacadeed oo lagu eedeeyey in uu sheegtay darajo aanu gaadhin.
Ninka loo wado hogaaminta Talyaaniga oo waxbarashadiisa su'aal la geliyay
Maalintii ugu dambeeysay ee ololaha doorashada Talyaaniga
Shacabka Talyaaniga oo maanta u dareeraya goobaha codbixinta
Waxa uu ku sheegay warqaddiisa aqoonta iyo khibradda uu leeyahay inuu "si dhamaystiran aqoontiisa sharciga ah" ugu qaatay jaamacadda New York (NYU).
Balse haweeney u hadashay NYU ayaa u sheegtay wargeyska New York Times in aanay heyn diiwaan muujinaya in ninkaasi uu wax ka bartay jaamacaddaasi.
Waxay intaa ku dartay in loo ogolaaday inuu cilmi-baaris ka sameeyo maktabadda jaamacaddaasi iyo in bare-sare oo qaanuunka ah uu ku martiqaaday inuu xubin ka noqdo guddiga Joornaalka Sharciga Talyaaniga.
Xisbiga Five Star Movement oo ka mid ah xisbiyada usoo xushay Conte xilka ra'iisal wasaaraha, ayaa ku gacan sayrtay eedeynta, waxaana uu yiri "ma jirto meel uu ku sheegay inuu jaamacadaasi kaso dhammeeyay shahaadada master-ka, balse waxa uu halkaa u joogay inuu si wanaagsan u barto luuqada Ingiriiska."
sugaya ogolaanshaha madaxweynaha Talyaaniga si ay u dhisaan dowlad cusub.
Abiy: "Waxaa bilowday wejigii u dambeeyay ee hawlgalka"
Xaaska Trump dalka ay ka soo jeedo maxay tahay cabsida soo wajahday?